Leedahay Blackberry ah oo ku fikiraya inay beddelaan si ay u Apple? Blackberry badan leeyahay waynaanta iyo soo jiidashada Apple ayaa weli ka taagan tahay ay u gaar ah. Uma baahnid inaad kaliya iPhone ah in ay ka hadlaan; aad leedahay dukaanka macruufka in uu yahay mid ka mid ah oo ugu weyn adduunka.
qalabka macruufka waa mid ka mid ah horumarinta smartphone ugu waaweyn ee dunida oo dhan. Apple ayaa heerka ugu sareeya loogu soo saaraha wax smartphone ay technology cusub oo awood leh. IPhone waxaa lagu yaqaano style, design, waxqabadka, iyo isku halaynta. Haddii aad bedelay aad telefoon kula cusub iPhone, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xogta.
1. Xogta laguu wareejiyo doonaa mid noqon doona xiriirada, fariimaha qoraalka ah, videos, Cajalado, sawirada, barnaamijyadooda iyo Guda yeedha. Noocyadan xogta waxaa lagu heli nooc ka mid ah qaar ka mid ah codsiyada. Sidaa awgeed, waxaad u baahan doontaa version ah socon ee Chine in ay helaan ee macruufka.
2. xog kasta yeelan doonaan in ay si gooni gooni ah u gudbiyaan ka BlackBerry in macruufka.
3. Wixii xog sida Xiriirada, waxaad u baahan doontaa in ay u hagaagsan la isticmaalayo habab kala duwan oo sida ay iyagu ma laga heli karaa sida files. Waxay loo gudbin karaa iyada oo la isticmaalayo file ah oo lagu magacaabo vCard, kaas oo xambaarsan xiriirada oo dhan.
4. Kala beddelashada mid xogta ay ka mid qaadan doono saacadaha, iyo waxa kale oo aad halis u ah misplacing file ama wareejinta furin.
Habka ugu fiican ee arrintaas go'aan ka fudud yahay oo isticmaalaya software xisbiga saddexaad sida MobileTrans, kaas oo kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan gurmad Blackberry in macruufka. Iibsiga ee xogta ka BlackBerry qalabka macruufka waxa loo qaybin karaa laba qaybood:
1. Dhoofiya Blackberry file kaabta in PC isticmaalaya Manager Blackberry Desktop.
2. Tan labaad, ka qeyb kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan files si ay macruufka aad by celinta files ka faylka kaabta badbaadiyey on your computer.
Dhoofinta gurmad Blackberry
Ka hor inta aadan in macruufka aad wareejin karaan macluumaadka, waxaad u baahan doontaa in la abuuro gurmad ah ee files ka BlackBerry. Tani gurmad file xambaarsan content aad ka mid file phone oo dhan. Hubi kaabta la updated mid. Halkan waxaa looga baahan yahay inay u dhoofiyaan gurmad:
1. BlackBerry Desktop
2. Phone BlackBerry
Just furo Desktop Blackberry iyo xirmaan telefoonka. Waxaa lagu ogaan doonaa telefoonka. Marka la ogaado kaliya guji kaabta iyo faylka badbaadin gal your computer.
Xal Easy: 1 click in xogta laga HTC wareejiyo macruufka Devices
Raadinta qaab fudud oo ay xogta ka qalab BlackBerry aad wareejiyo qalabka iPhone iyo macruufka? Waxaad isticmaali kartaa software ah sida Wondershare MobileTrans.
MobileTrans Waa 1-click software wareejinta xogta. Waxaad si macruufka aad dhamaystiran xogta ka Blackberry wareejin karaa mid fudud. Software Tani waxay waddaa xogta computer iyo suuqa kala iibsiga oo isticmaalaya xidhiidh USB. Full Version lagala soo bixi karaa website Wondershare. Waxaa jira labada daaqadaha iyo version Mac.
Software ogolaan karo kala iibsiga u dhexeeya wax casriga ah ka macruufka, Android, daaqadaha iyo Nokia. Waxaa la og yahay in ay taageeraan ku dhowaad 3000 oo lagu daydo telefoonada.
Waxaad si fudud dib kartaa macluumaadka telefoonka iyo ku celin si tayo leh asalka.
Sidoo kale Software waxay leedahay masixi doorasho, taas oo masixi dhammaan xogta ka telefoonka iyo ku celin in goobaha warshad. Tani fursadaha weyn marka aad raadinayso in ay iska iibiso telefoonka ama wareejiyo user.
Interface ee software-ka waa u fududahay iyo habka qaadan dhowr daqiiqo oo kaliya.
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan kaabta in macruufka isticmaalaya MobileTrans
MobileTrans Ka dhigaysa nidaamka adag ee suuqa kala iibsiga xogta u dhexeeya laba OS kala duwan fudud. Ku rakib software ku saabsan pc iyo hubi in aad maraan hage haddii wax shaki ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo software ah. Halkan waxaa looga baahan yahay habka:
Computer Mac ama Windows
Bilow software ah oo taga si aad fursad u Soo Celinta ka hayaan. Waa doorasho ee cagaaran. Hadda oo kaliya ay doortaan in la soo celiyo ka kaabta ka Blackberry.
Hadda software wuxuu sugayaa in aad ku xidhi telefoonka. Sida ilo xulo file kaabta ka computer iyo qalab macruufka ka dhigi doonaa sida aad u socoto. Laga soo bilaabo guddi dhexe oo kaliya dooro content aad rabto in lagu wareejiyo si aad iPhone oo guji Start Copy.
On suuqa kala socda waxaad ka arki kartaa horumarka kala iibsiga. Markii loo qaato waxay ku xirnaan doontaa tirada xogta wareejiyo.
Marka nidaamka ku dhameysatay, ka saar cable iyo waxaad ka arki kartaa xogta ku saabsan qalabka macruufka. Wuxuu furaa barnaamijyadooda kala si ay u arkaan xogta.
Waa kuwee macruufka qalabka ayaad isticmaashaa?
Qalabka macruufka ka mid yihiin Maraykanka oo caan ah ay sabab u tahay calaamad weyn ee Apple. Waxa uu abuuray taageerayaasha weyn ay sabab u tahay wax soo saarka ay hal abuur leh oo cusub. Waxay sii tiimbashada ay macaamiisha la soo saarka cusub. Sidaas oo macruufka qalab aad u isticmaali?
Xulashada 1: iPhone 6s (Plus)
Xulashada 2: iPhone 6 (Plus)
Xulashada 3: 5s iPhone
Xulashada 4: iPad Air 2
Xulashada 5: iPad Air
Xulashada 6: iPad mini 2
Doorashada 7: iPad mini 3
Xulashada 8: iPad mini
Xulashada 9: 4s iPhone
Xulashada 10: iPhone 4
Solutions for Bluetooth arrimaha la xiriira ee Qalabka shaqada macruufka 8
Sida loo akhriyo Old Facebook Rasuulka Messages on macruufka
Best macruufka Photo Transfer in Import macruufka Photos in Computer
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in macruufka Devices